Hazvisi zvechokwadi: Ukraine inoramba kubiwa kwendege yayo muKabul
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » mhosva » Hazvisi zvechokwadi: Ukraine inoramba kubiwa kwendege yayo muKabul
Afghanistan Kuputsa Nhau • Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • mhosva • Hurumende Nhau • Iran Kuputsa Nhau • nhau • vanhu • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Ukraine Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Ukraine inoramba kubiwa kwendege yayo muKabul
Sekureva kweUkraine Ministry Yezvekunze, ndege dzese idzo Kiev yaishandisa kubvisa vagari veUkraine kubva kuAfghanistan dzakadzokera zvakachengeteka kuUkraine.
Ukraine inoti hapana ndege dzeUkraine dzakabiwa muKabul kana chero imwe nzvimbo.
Ndege dzese dzekuUkraine dzekubuda dzakadzokera kuKiev zvakachengeteka.
256 vanhu vakabviswa nendege nhatu.
Sekutaura kwemutauriri weUkraine Ministry yekune dzimwe nyika, mishumo yekutanga yendege yeUkraine yakatorwa muguta guru reAfghan yeKabul uye yakazoendeswa kuIran yakanga isiri yechokwadi.
“Hapana ndege dzeUkraine dzakabiwa muKabul kana kune imwe nzvimbo. Mishumo yendege yakapambwa kuti zvimwe zvinoburitsa nhau zvinoparadzira hazvisi zvechokwadi, ”mutauriri weUkraine Foreign Ministry, Oleg Nikolenko akadaro mubvunzurudzo neRBC Ukrainian agency nhasi.
Maererano Kunze kwenyika Ministry zvepamutemo, ndege dzese dzaishandiswa naKiev kubvisa vagari veUkraine kubva kuAfghanistan dzakadzokera zvakachengeteka kuUkraine. Kubva ikozvino, vanhu mazana maviri nemakumi maviri nevashanu vakabviswa nendege nhatu.
Mutauriri weIran Civil Aviation Organisation Mohammad Hassan Zibakhsh, naiyewo akaramba nyaya dzekupambwa kwendege. Sekureva kwesangano renhau re Mehr, akataura kuti ndege yeku ndege yekuUkraine yakamira yekuzadza mafuta muguta reIran reMashhad nemusi weMuvhuro uye yakazonanga kuKiev, uko yakamhara na10: 50pm nguva yemuno.
Mutevedzeri wegurukota reUkraine Yevgeny Yenin akataura kare kuti vanhu vasingazivikanwe vakabata ndege yeUkraine neChipiri ndokuenda nayo kuIran. Sekureva kwemukuru uyu, ndege iyi yakatobiwa.